Hidhamtooti Oromoo Kuma Soddomaa Ol Ta’an Hiraarsamaa Jiru – Oromedia
Home » Uncategorized » Hidhamtooti Oromoo Kuma Soddomaa Ol Ta’an Hiraarsamaa Jiru
Hidhamtooti Oromoo Kuma Soddomaa Ol Ta’an Hiraarsamaa Jiru
(Oromedia, 3 Sadaasa 2016) Guyayaa Irreechaa, Onkoloolessa 2 bara 2016, asitti Oromooti kuma soddomaa ol ta’an mooraalee waraanaa Xoolay, Awaash 7 Kiiloo fi Alagee keessatti dararamaa akka jiran beekame.
Odeessi Oromedia gahe akka hubachiisutti, Mooraa leenjii waraanaa Oromiyaa kibba-lixaa, godina Jimmaa keessatti argamu, Xoolayi keessatti Oromoon hidhaman hedduu hiraarfamaa akka jiran beekame.
Odeeffannoon maddeen amanamoo irraa arganne akka ibsutti, Xoolayitti Oromooti hidhaman 6,000 ol ta’an, gamoojii ho’aa fi hedduu rakkisa akeessatti ganamaa fi galgala reebamaa, hiraarfamaa fia dabamaa jiru.
Hidha akana keessattis nyaati gahaa fi wal’aansi fayyaa gahaan akka hin jirre beekameera.
“Namootni yeroo amma achitti huguramanii jiran dararama fi ajjeechaan irra gahaa jira,”kan jedhe maddi keenya, hidhamtooti kuma jaha caalan mooraa Xoolay keessatti midhaanii fi bishan akka hin arganne godhamaa akka jiran addeesseera.
Sababa rakkoon kun hammaateef, hidhamtooti bishaan bishaan lolaa, lafa yaa’uu dhuguuf dirqamaa jiru. Kun immoo dhukkuboota hedduuf isana saaxilee jira. Kanneen dhukkubsatan immoo wal’aansaa fi dawaa argataa hin jiran.
“Mooraan sun treatement tokko illee kan hinqabnee dha. Kan nyaatanis, kan dhuganis madda dhibee ti; dhibaman immoo yaaliin hin jiru,”jedheera maddi keenya.
Mooraa Xoolayi keessa haala jirus yeroo ibsu, “lafa fi manni keessa ciisan babbaqaqaa dha; gidaarrii fi bantiin isaa qorqoro dha. Yeroo hoo’aa akka ibiddaatti nama guba; yeroo qorraa immoo hedduu nama adoocha,” kan jedhe maddi keenya, hidhamtooti Oromoo haala akkanaa keessatti dhukuba fi balaa guddaan dararamaa akka jiran huabchiisee jira.
Yeroo ammaa kana uumatni Oromo 6000 ol kan tahan godinalee Shawa lixaa, Shawa kibba lixa, Shawa kaabaa fi kkf keessaa ukkaamfamanii Xoolayitti argaman.
Haaluma walfakkaatuun gaafa guyya 22/02/2009 ALH sababa isportii humnaa ol hojjachiisan mormii fi bishaan dorkachuun walitti bu’insa ka’een lubbuun hidhamtoota hedduu akka darbe beekameera.
Sababa waldhabbii kanaan yeroo amma kana daandiin gara moora sana deemsiisu eegumsa guddaa jala jira. Kana malees, naannoo moorichaa waraanaa addattin eegama kan jiruu fi namootni naanno sanatti akka hinsosonee fi bahuu galuun dhorka akka tahe hubatameera.
Gama kanan Oromoon kumatamatti lakkawamanii godinale Harargee, Sabbata, Burrayyu, Sandafa, Laga xaafoo, Bishooftu, Holota, Dukam irra qabamanii moora Awash 7 kilo jedhamutti huguramanii dararama guddaa keessa jiran.
Hidhamtooti nannoo godinalee Shawa baha, Arsi lixaa, Arsii, Baalee, Gujii fi Booranaa imoo gammoojjii Alageetti huguramanii gidira arga jiran.
Gabaasti bakka addaddaa irraa nu gahaa jiru akka hubachiisutti, yoo xiqqaate Irreecha asitti qofa namoonni kuma soddomaa ol hidhamanii gidira argaa jiran.
Previous: Finfinneetti Yaadannoon Godhame
Next: Guyyaan Yaadannoo Fincila Diddaa Gabrummaa Atlaantaatti Kabajame